वीरगञ्जका अधिकांश कोरोना संक्रमितले उपचार अभावमै ज्यान गुमाउछन् ! « News24 : Premium News Channel
वीरगञ्जका अधिकांश कोरोना संक्रमितले उपचार अभावमै ज्यान गुमाउछन् !
वीरगन्ज (पर्सा), ३१ भदौ । पर्सामा कोरोना संक्रमणका कारण हालसम्म ६७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालसहित यहाँ सञ्चालित अस्थायी कोरोना अस्पताल गण्डक तथा हेल्थकेयरमा ६० जना संक्रमितहरुको मृत्यु भएको हो ।
त्यस्तै, अस्पताल चहार्दा चहार्दै ५ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ, भने अस्पतालले भर्ना लिएपनि उपचारको अभावमा दुईको मृत्यु भएको छ । कोरोना संक्रमणबाट कोरोना अस्पतालमा पर्साका ४३ जना, बाराका १४ जना तथा रौतहटका ३ जनाले ज्यान गुमाएका हुन् ।
त्यस्तै, अस्पताल चहार्दा चहार्दै तथा उपचारको अभावमा पर्साका ६ जना र बाराका १ जनाको मृत्यु भएको हो । वीरगन्जमा सञ्चालित कोरोना अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो ज्यान नै जोखिममा राखेर संक्रमितको उपचार गरिरहेका भनेर स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई वाहवाही भइरहेको छ ।
तर, अस्पताल भित्रको अव्यवस्थित उपचारशैली तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको चरम लापरवाहीका कारण मृतक ६७ जनामध्ये ५० जनाको ज्यान गएको अनुमान गरिएको छ । कोरोना संक्रमितहरुको उपचारको लागि बाहिर ठूला–ठूला भाषण गरिएतापनि अस्पतालभित्रको अवस्था भने दयनीय छ ।
जहाँ खान–बस्नको उचित व्यवस्था छैन, आवश्यकता अनुसार औषधि छैन । त्यस्तै, स्यहार सुसार गर्ने कुनै पनि सेवा छैन । नारायणी अस्पतालले सञ्चालन गरेको अस्थायी कोभिड गण्डक अस्पतालको आईसीयू कक्षको अवस्था लथालिङ्ग छ ।
आईसीयू कक्ष गम्भीर प्रकृतिका विरामीलाई राखेर उपचार गर्ने कक्ष हो । जीवन मृत्युसँग संघर्ष गरिरहेका विरामीहरुलाई आईसीयू कक्षमा राखेर २४ सै घण्टा स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा राखेर उपचार गरिन्छ ।
तर, गण्डक अस्पतालको आईसीयू कक्ष जनरल कक्ष भन्दा पनि अव्यवस्थित छ । धाराको पाइप फुटेर आईसीयु कक्षमा पानी जमेको छ । अस्पतालको आईसीयु कक्षमा मेशिन लगायत वेडहरु सबै छ तर, कुनै पनि मेशिनहरु चल्दैनन् । सबै मोनिटर बन्द छन् ।
जथाभावी फोहेर फालिएको छ । इन्जेक्सनको निडिल, स्लाइन पानीको बोतल, सिरिन्ज लगायत औषधिजन्य पदार्थहरु जथाभावी फालिएका छन् । सरसफाई गर्न कोही आउँदैनन् । आइहाले पनि बाहिरको फोहो। सफा गरेर जान्छन् । स्लाइन पानी चढाईदिने नर्स समेत छैनन् । आक्सिजन चढाइदिने सहयोगी छैन ।
आईसीयू कक्षमा विरामीलाई स्यहार–सुसार गर्ने कोही छैन । लुगा फेरिदिने कोही छैन । पानी ल्याइदिने कोही नभएको कारण संक्रमित आफै बाहिर गएर पानी ल्याउन बाध्य छन् । अक्सिजन चढाइदिने कोही नभएको कारण संक्रमितहरुले आफै अक्सिजन चढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
संक्रमितको उपचारमा खटिने चिकित्सकहरुको त कुरै छाडौं, औषधि दिने नर्स पनि समयमा आउँदैनन् । कहिले काँही आएपनि औषधि नजिकै राखेर आफै खाइहाल्नु होला भनेर जान्छन् । चिकित्सकहरुको मुख समेत देख्न नपाइने विरामीहरुको गुनासो छ ।
गत आइतबार राति ५५ वर्षीया महिला किरणदेवी कर्णले कोरोना संक्रमणको कारण ज्यान गुमाइन् । उनको भित्री कथा पनि बेग्लै छ । वीरगन्ज–११ श्रीपुरस्थित नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ स्कुलकी शिक्षिका रहेकी उक्त महिला भदौ १२ गते नारायणी अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन् ।
उनको छातीमा पानी जमेको कारण स्वास प्रश्वासमा समस्या भएको थियो । भर्ना हुनुपूर्व उनीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थिएन । भदौ २२ गते नारायणी अस्पतालका प्रवक्ता डा. अतुलेश चौरसियाले उनलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि गरेका थिए ।
मृत्युको अघिल्लो साझ उनको पीसीआर नगेटिभ आइसकेको थियो । उपचारका लागि भर्ना भएका उनको १२ देखि २२ गतेसम्म १० दिनको अवधिमा पनि छातीमा जमेको पानी निकालिएन् । चिकित्सकको लापरवाहीका कारण मृत्यु भएको यो पहिलो र एउटा मात्रै घटना भने होइन ।
नारायणी अस्पतालमा भदौ २१ गते अक्सिजन नपाएर बारा सपहीका युवा विक्रम चौधरीको मृत्यु भयो । साउन २४ गते अस्पताल चहार्दा चहार्दै छपकैयाकी २० वर्षीया युवती विष्णु लामाको मृत्यु भयो ।
साउन २७ गते बारागढी गाऊँपालिका पथराका १३ वर्षीय बालक सुशील कुमार साहको नेशनल मेडिकल कलेजमा मृत्यु भयो । साउन २२ गते श्रीपुरका ६० वर्षीय चलितर महतो, २३ गते छपकैयाका ७४ वर्षीय जग्गु साह, श्रावण २४ गते रामटोलका १७ वर्षीय अनिस कुमार गुप्ता, साउन १७ गते कलावती देवी लगायतका दर्जनौ नागरिकहरुको अस्पताल र चिकित्सकको लापरवाहीका कारण मृत्यु भइसकेको छ ।
यसरी कोरोनाको नाममा हत्या भइरहँदा पनि सम्बन्धित स्थानीय निकाय, प्रहरी प्रशासनसमेत मौन रहेका छन् । यसबारे पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामाङ्गले कोरोना अस्पतालको लथालिङ्ग अवस्थाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
उनले आफ्नो कार्य सुरक्षा दिने भएको र अस्पतालभित्र गएर अनुगमन पनि गर्न नसकिने भएकोले त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको तर अब यस्तो अवस्था देखेर तत्काल नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डसँग बुझेर आवश्यक कारवाही प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने आश्वासन दिए ।
त्यस्तै, नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्ड डा. सन्जय ठाकुरले एक दुईवटा घटना बाहेक अन्य त्यस्तो घटना नभएको बताए । उनका अनुसार एक विरामीले पानी भर्ने क्रममा धारा तोडिदिएर छाडेको कारण आईसीयू कक्षमा पानी जमेको स्वीकार गर्दै नारायणी अस्पतालबाट खटेको स्वास्थ्यकर्मीहरुले दिनहुँ सेवा दिइरहेका दाबी गरेका छन् ।
संक्रमितहरुले अक्सिजन चढाउने समेत कोही नभएको भनिरहँदा मेसु ठाकुरले आफ्नो स्टाफहरुले सधैं विरामीहरुको निगरानी गरिरहेको बताएका छन् । जथाभाबी फोहर फालेको विषयमा समय समयमा सरसफाईकर्मीहरुले गएर सरसफाई गरिरहेका पनि दाबी गरे ।
प्रदेश १ मा पछिल्लो २४ घण्टामा ५१३ कोरोना संक्रमित थपिए
सबैको उपचार गर्न सक्ने गरी स्वास्थ्य पूर्वाधार तयारी अवस्थामा रहेको स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको भनाइ
प्रदेश १ मा थपिए एकै दिनमा ८७० कोरोना संक्रमित
तारा आचार्य, विराटनगर, ५ कात्तिक । म्याद गुज्रेको खाद्य सामग्रीहरुमा रिलेबलिङ गरेर वितरक कम्पनीहरुमार्फत बजारमा
एजेन्सी, ५ कात्तिक । हङकङको विमान कम्पनी क्याथी प्यासिफिक एयरवेजले आठ हजार ५०० रोजगारी कटौती